❤️ Instagram agaghị ekwe ka m banye : Ndozi ndozi - Winches Club
Instagram bụ netwọ mgbasa ozi mmekọrịta siri ike, Ọtụtụ nde mmadụ na -eji kwa ụbọchị ebipụta foto na vidiyo okike na ịhụ ihe ndị enyi na ezinụlọ ha na -eme ndị nwere mmetụta. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ejikwa saịtị ahụ iji soro ndị na -eso ụzọ ha kerịta ọdịnaya wee zụlite azụmahịa ha..
Ọ bụ ihe na -akụda mmụọ enweghị ike ijikọ na ekwentị gị Akaụntụ Instagram, mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ mmadụ na -ahụ ọnọdụ a kwa ụbọchị. Enwere ọtụtụ nkọwa enwere ike maka ihe a.
Ọtụtụ ndị na -eme egwuregwu, ndị ọchụnta ego na azụmaahịa na -eji Instagram dị ka ikpo okwu azụmahịa. Mgbe ha enweghị ike ịnweta akaụntụ ha, ọ nwere ike belata ọrụ azụmahịa, ọnụnọ mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na ọbụna ego.
Ọ dabara nke ọma, enwerekarị ndozi dị mfe maka ọtụtụ nsogbu. N'ime akwụkwọ ntuziaka a, ị ga -achọta ozi ka esi ejikọ aka na akaụntụ Instagram gị.
Ozi njehie njikọ Instagram
Ọ bụrụ na ịnata ozi mperi na -agwa gị na mbọ njikọ gị kụrụ afọ n'ala, nhọrọ nke mbụ gị bụ ịbanyegharịa okwuntughe gị wee nwaa ọzọ. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, ọ pụtara na enwere nsogbu ọzọ na akaụntụ gị.
Mgbe mbọ njikọ gị kụrụ afọ n'ala, ị nwere ike nweta otu n'ime ozi njehie dị iche iche, mgbe ụfọdụ ozugbo na ekwentị gị na mgbe ụfọdụ na email gị. Ọ dịghị onye nwere mmasị ịnata ozi mperi na -atụghị anya ya, mana ọ bara uru na ozi a na -enye gị ihe ngosi maka ihe kpatara na ị jikọghị.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe ịma ọkwa ọdịda nbanye nke Instagram na -ejikarị:
ndo, enwere nsogbu na arịrịọ gị.
aha Instagram user is not found.
Anyị enweghị ike ịbanye na akaụntụ gị.
Biko lelee aha njirimara gị wee nwaa ọzọ.
Megide chefuru okwuntughe maka “aha njirimara” ?
Aha ahụ onye ọrụ ị banyere adịghị na akaụntụ.
Tupu anyị atụlee ụzọ isi dozie nsogbu ndị a, Ka anyị buru ụzọ leba anya n'ihe nwere ike kpatara njehie njikọ a. Ozi njehie nke Instagram na -enyekarị gị ezigbo ntụzi aka gbasara ihe nwere ike kpatara nsogbu ahụ yana azịza ya..
Ihe nwere ike ịkpata ọdịda Njikọ
Ihe na -ebutekarị ọdịda ọdịda bụ na i tinyere paswọọdụ na -ezighi ezi, nke na -eme ọtụtụ mgbe. Ọ nwere ike ịbụ typo dị mfe, nke njehie ntinye (mkpụrụedemede ukwu ma ọ bụ obere mkpụrụedemede), ma ọ bụ ọbụna paswọọdụ na -ezighi ezi. Lelee na okwuntughe gị ziri ezi, ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu paswọọdụ, jiri njikọ paswọọdụ nrụpụta nke enyere site Instagram.
A na -ebute njehie nbanye Instagram site na nbanye mbụ na ngwaọrụ ọhụrụ. Mgbe ikpo okwu amataghị ngwaọrụ ị na -eji, ọ nwere ike igbochi gị ịnweta ya ruo mgbe ịmechara nyocha ọzọ.
Agbanyeghị na usoro a nwere ike iyi ihe adịghị mma na enweghị isi, nke a bụ usoro nchekwa dị mkpa. Ọ bụrụ na mmadụ anwaa mbanye anataghị ikike akaụntụ Instagram gị site na iji ngwaọrụ nke ha, nzọụkwụ a nwere ike ịkwụsị ya. Nkwenye ọzọ na -ahụ na nchekwa na nzuzo nke akaụntụ gị echekwara.
Okwu njikọ ndị ọzọ metụtara ngwaọrụ gụnyere iji ngwaọrụ ochie nke na-anaghịzi akwado ngwa Instagram, yana ntọala na ntọala oge na ezighi ezi na ngwaọrụ ahụ.
Mgbe ụfọdụ, nsogbu ebe nchekwa ma ọ bụ ngwaike dị na ekwentị gị nwere ike imetụta ọrụ ngwa ahụ. Data na njikọ Wi-Fi nwere ike ịta ụta, na otu nwere ike bute nsogbu nkwukọrịta n'etiti ngwaọrụ gị na sava Instagram.
Ihe ikpeazụ nwere ike ime maka ịbanye na -abaghị uru bụ igbochi ma ọ bụ hichapụ akaụntụ Instagram gị.. Ị nwere ike mee nke a n'onwe gị, ọbụna na mberede. Ọ nwekwara ike bụrụ na mmadụ mebiri akaụntụ gị ma ọ bụ na ikpo okwu Instagram nwere ihe kpatara igbochi gị nwa oge nweta akaụntụ gị.
Ntuziaka maka otu esi ejikọ akaụntụ Instagram gị
Ugbu a bụ oge ileba anya na azịza maka ọdịda nbanye Instagram. Ozugbo ị natara ozi mperi ma nwee ụfọdụ echiche kpatara ya, ị nwere ike ịnwale usoro ndị dị n'okpuru.
Ọtụtụ n'ime ha bụ ndozi ngwa ngwa, mana ụfọdụ nwere ike iwepụta obere oge na mbọ ịchọpụta nsogbu na chọta ihe ngwọta. Ị nwedịrị ike ịkpọtụrụ ndị ahịa Instagram ma ọ bụ chọta ngwa mpụga iji nyere gị aka..
Ndị a bụ ụfọdụ ndozi ngwa ngwa nke nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu ahụ:
Were obere oge wee chegharịa okwuntughe gị
Ọ bụrụ na ị nwara iji otu okwuntughe banye ọzọ, izu ike nwere ike inyere gị aka icheta ihe gbasara paswọọdụ gị. Ma ọ bụghị, naanị jiri njikọ paswọọdụ nrụpụta na Instagram.
Gbanyụọ ma gbanyụọ ngwaọrụ gị
Malitegharịa ekwentị bụ ndozi ngwa ngwa nke na -arụkarị ọrụ nke ọma. Ọ nwekwara ike dozie nsogbu njikọta n'etiti ngwaọrụ na sava ngwa.. Ọtụtụ mgbe, mgbe anyị na -eji ngwaọrụ anyị oke, ngwa nwere ike malite ịrụ ọrụ adịghị mma, yabụ nwalee nzọụkwụ a mbụ.
Lelee njikọ gị
Ọ bụrụ na agbanyeghị data ekwentị gị ma ọ bụ Wi-Fi, ị nweghị ike ịbanye. Ọtụtụ mgbe, njikọ gị na -akụ afọ n'ala n'amaghịdị ya. Njikọ na -adịghị ike ma ọ bụ nkwụsịtụ nwekwara ike imetụta ike ijikọ gị.. Ị nwere ike ịmalitegharị rawụta Wi-Fi gị ma ọ bụrụ na ịnweta ozi mperi gbasara ijikọ na sava ahụ.
Melite oge ngwaọrụ na ntọala ụbọchị ya
Ị nwere ike ịnọ na ngwaọrụ ọhụrụ ma ọ bụ dị iche iche nwere ntọala oge yana ụbọchị adịghị mma. Ọ nwekwara ike bụrụ na agbanwere ntọala ndị a n'amaghị ama na ngwaọrụ gị.. Njehie ndị a na -emetụta ike ịbanye na Instagram. Lelee ma ntọala ọ bụ eziokwu ma melite ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ụzọ kacha mma bụ ịhọrọ imelite ntọala oge na ụbọchị na -akpaghị aka.
Kpochapụ ngwa na data ngwa
Ọ bụrụ na mperi ahụ sitere na ngwa n'onwe ya, na -ekpocha oghere mgbe mgbe nwere ike idozi nsogbu ahụ. N'ọnọdụ ahụ, ịkwesịrị ịga na ntọala ngwaọrụ. Na ntọala ngwa, ị nwere ike họrọ Instagram wee họrọ nhọrọ iji kpochapụ cache na data. Ị nwekwara ike ịnwale ịbanye na PC gị ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ iji hụ ma ị nwere ike nweta akaụntụ gị ebe ahụ..
Ngwọta njikọta Instagram akọwapụtara n'elu bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mfe na ngwa ngwa.. Ọtụtụ n'ime nsogbu ndị a nwere ike idozi ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na akaụntụ gị, ị nwere ike ịchọ ngwọta ka elu.
Tọgharia okwuntughe gị
Ị nwere ike ịnwale ịtọgharịa okwuntughe gị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike icheta nke ziri ezi.. Ọ na -ewe nkeji ole na ole, ma ọ na -arụkarị ọrụ nke ọma.
Melite ngwa ahụ
Ngwọta ọzọ ị nwere ike ịnwale bụ imelite ngwa ahụ. Mgbe ngwa gị agabeghị, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka o kwesịrị na enweghị atụmatụ na ọrụ ọhụụ.
Banye na akaụntụ Facebook gị
Ị nwekwara ike ịnwa iji akaụntụ Facebook gị banye. Ọ bụrụ na mbọ ndị a niile ada, ohere kacha mma bụ ịkpọtụrụ Instagram wee rịọ ha ka ha nyere gị aka dozie nsogbu akaụntụ.
Edemede gara agaEtu ị ga -esi mara ma ọ bụrụ na mmadụ egbochila gị na Instagram
Akụkọ na-esoteKedu oge kacha mma biputere na Instagram ?